IBC2019: New Cobalt Digital Solutions သည်စတူဒီယိုနှင့်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများအတွက် 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထောက်ပံ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC2019: နယူးဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions ပံ့ပိုးမှု 4K စတူဒီယိုများအတွက် Workflows နှင့်မိုဘိုင်း Applications ကို
IBC2019: နယူးဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions ပံ့ပိုးမှု 4K စတူဒီယိုများအတွက် Workflows နှင့်မိုဘိုင်း Applications ကို
Champaign က, မကျန်းမမာ - ။ သြဂုတ်လ 13, 2019 - ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် openGear®၎င်း၏ကဒ်-based 4K နှင့် HDR လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် (2019.B10 ရပ်) အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC44 မှာလာမည့်လတွင်ဘောင်ခတ်။ ကုန်ပစ္စည်းပျေါလှငျက၎င်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုအသစ်ဒီကုဒ်ဒါနှင့်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ, RIST အဓိကပရိုဖိုင်, bi-directional SDR / HDR ကိုကူးပြောင်းဖြေရှင်းချက်များနှင့်အသစ်သောမြင်ကွင်းစုံများနှင့်ဖြန့်ဖြူးချဲ့စက်များပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ Plus အား, ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခု 12G openGear router ကိုနှင့် RIST တံခါးပေါက်ဖြေရှင်းချက်ဖွယ်ရှိကြောင်းသိရသည်။
openGear ဘောင်များအတွက် HEVC / AVC / MPEG-9992 ဒီကုဒ်ဒါ၏အသစ် 2-DEC စီးရီးပြပွဲမှာမိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ လိုအပ်တဲ့အခါအသုံးပြုသူများကိုသာလိုအပ် features တွေအတွက်ပေးချေနိုင်အောင်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ၏ကုမ္ပဏီ၏ 9992-ENC စီးရီးကဲ့သို့ပင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် 9992-DEC, လစာ-အဖြစ်-you-go လိုင်စင်ပါရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အများဆုံးတင်းကြပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်း, အ 9992-DEC 4K resolution ကိုမှတက်ကို support နဲ့ audio ဒီကုဒ်ဒါစွမ်းရည်တစ်ဦးအပြည့်အဝအဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါစီးရီးကိုလည်း 9992-2DEC Dual-ရုပ်သံလိုင်းဒီကုဒ်ဒါအဖြစ် Single-ရုပ်သံလိုင်း 9992K သို့မဟုတ် Dual-ရုပ်သံလိုင်း 4K အတူ 4DEC-2K-HEVC နှင့် H.265 များအတွက်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကဘော့ ARQ, နောက်ခံနည်းပညာ Power RIST အပေါ်ပူးပေါင်းအလုပ်တစ်ခုEmmy® Award ဆုလက်ခံရယူအများအပြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ IBC မှာ, ကိုဘော့ထိုကဲ့သို့သော encryption ကို (DTLS သို့မဟုတ် PSK), ဥမင်, NAT သွားလာလမ်းကြောင်း, Point-to-မြားဖြန့်ဖြူးနိမ့်နည်းနည်းမှုနှုန်း optimization နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ST-2110 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ် features တွေဖြည့်စွက်ထားသည့် RIST အဓိကပရိုဖိုင်များအတွက်ထောက်ခံမှုဖွယ်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ပြပွဲမှာ HDR အတွက်နယူးတိုးတက်မှုဘော့ရဲ့ 9904-UDX-4K တက် / ဆင်း / လက်ဝါးကပ်တိုင် converter အတွင်းပြီးပြည့်စုံသောအဆုံးမှအဆုံးသို့ HDR လုပ်ငန်းအသွားအလာများပါဝင်သည်။ တစ်ခုတည်းသာသနာကို option ကိုသို့ကို bundle နိုင်သည့် HDR tools များ၏ Technicolor ရဲ့ suite ကိုအသုံးချဖို့, အ 9904 အပြည့်အဝ HDR ပုံတစ်ပုံသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းပြန် HDR ကို SDR မှ HDR ထံမှပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲနေသော metadata ကို generate နှင့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုဘော့ကို dual လက်ငင်းနှင့်အသုံးပြုသူထိန်းချုပ်မှုဖြည့်စွက်, မြင်ကွင်းစုံ၎င်း၏ရေပန်းစား 9971 စီးရီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း 4K ၏ Uncomplicated စောင့်ကြည့်ရေးပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် HD အချက်ပြမှုများ, သုံးခုစလုံးမော်ဒယ်များအချက်ပြမှုများနှင့် applications များအမျိုးမျိုးလိုက်လျောညီထွေ။ အားလုံးမော်ဒယ်များလည်းပါဝင်သည် HDMI စားသုံးသူ-တန်း 4K မော်နီတာအပေါ်စီးပွားရေးအရကြည့်ဘို့ရလဒ်။ one-button ကို template ကိုရလာဒ်ကဒိ setup ကိုရိုးရှင်းပေမယ့်အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်အပြင်အဆင်ဖန်တီးကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ ငါးအထိ 9971 တဦးတည်း2ru openGear ဘောင်ထဲမှာ installed နိုင်ပါသည် - တစ် cascaded ကွင်းဆက်နှင့်မျိုးစုံကတ်များ 64 သတင်းရပ်ကွက်မှတက်၏မြင်ကွင်းစုံအပြင်အဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။
Das ၏အသစ် 9915 စီးရီး 4K 12G-SDI သတင်းရင်းမြစ်ကိုထောကျပံ့များနှင့်ကြေးနီရှည်လျားအလုံအလောက်မာစတာထိန်းချုပ်မှုအတွင်းအများဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများရောက်ရှိဖို့ပြေးဘို့ခွင့်ပြုပါ။ စီးရီးလေးမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ, အ 9915DA-4 × 16-XPT-12G, crosspoint-ရှုံးအများအပြား configurations အတွက် 16 DA လက်ငင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုလေး input ကိုလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်။ 10 ကတ်များမှတက် 40 ရလဒ်မှတက်မှ input ကိုဖြန့်ဖြူး၏လိုင်းများ 160 မှတက်ဘို့ခွင့်ပြု, တဦးတည်း openGear ဘောင်ထဲမှာ installed နိုင်ပါသည်။
ခရစ်ကို Shaw, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, "လူငယ်ကဏ္ဍယခုထုတ်လုပ်မှုစံအဖြစ် 4K ကိုလက်ခံနှင့်ကိုဘော့စတူဒီယိုနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက် openGear-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်မီနူးရှိပါတယ်" ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကို process စောင့်ကြည့်ခြင်း, 4K နှင့် HDR အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းသက်သာနည်းလမ်းများသည်။ "
အဆိုပါဘော့တဲမှာအခြားထုတ်ကုန်များတစ်ဦး 12 × 12 routing ကို matrix နှင့်အတူသစ်တစ်ခု 12G-SDI openGear routing ကိုကဒ်ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ အမွေဘောင်သို့ fit ဖို့ဒီဇိုင်း, ကဒ်ဖောက်သည် 4K ကျွန်းများကိုထိရောက်စွာကုန်ကျကိုအသုံးပြုဖို့ကူညီပေးသည်။ RIST နည်းပညာ၏ခေါင်းဆောင်မှုသရုပ်ပြ, ကိုဘော့လည်း SafeLink, မျိုးစုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးအတွက် ယူ. အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိကဗီဒီယိုလင့်ခ်ကာကွယ်ပေးရန် RIST wrapper ပေးနိုငျတဲ့ openGear ဖြေရှင်းချက်စတင်နေပါတယ်။
ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Inc ကဒီဇိုင်းများနှင့်ကျော်လွန်ပြီးအိုင်ပီ, 4K, HDR, မိုဃ်းတိမ်မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်မာစတာထိန်းချုပ်မှု client များအကူးအပြောင်းကိုဆုရအစွန်းပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နှင့်။ တစ်openGear®ပဏာမခြေလှမ်းအတွက်တည်ထောင်သူမိတ်ဖက်များနှင့်ဂုဏ်ယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် SMPTE, ကိုဘော့လည်းနည်းပညာဆိုင်ရာမွေးစားရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံး-of ဖောက်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါပလက်ဖောင်းပေးထားပါတယ်။ ကုန်သည်တွေ, System Integration နှင့်အခြားမိတ်ဖက်တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွန်ရက်ကတဆင့်ဖြန့်ဝေ, ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုငါးနှစ်အာမခံနှင့်အတူကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.cobaltdigital.com.
12G-SDI 4K CES2017 ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဒီကုဒ်ဒါ အန်ကုဒ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HDR IBC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မြင်ကွင်းစုံ RIST SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် 2019-08-13
ယခင်: BMW ကား, UCSF ကျန်းမာရေး, သူ Carl ရဲ့ Jr နှင့်ပိုမိုများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အတူ 1606 စတူဒီယို Marks ခြောက်လနှစ်မြောက်။
နောက်တစ်ခု: VFX ကို Legion of Honour '' အမရေိတည်ဆောက်သောစားနပ်ရိက္ခာ, '' သမိုငျး Channel ကိုဖွင့်နယူးဒိုးကုဒရမ်မာများ Mini ကို-စီးရီးများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖန်တီးလိုက်တဲ့